“Ianao No Firenena!” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2013 0:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Aymara, عربي, বাংলা, Ελληνικά, English
Tsy endrika fahita matetika ho mpikambana mamokatra ao anatin'ny fiarahamonina ireo vitsika, vorona, ary lambo 3D… nefa, maninona moa?
Taorian'ny fanambarana ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2007, nolalovàn'ny onjanà herisetra ara-poko i Kenya teo anivon'ireo vondrom-poko maherin'ny 70 misy ao aminy. Nitarika fahafatesana mahery ny 1000 sy mponina nafindra mahery ny 500.000 ireo vokatra nifandirana ireo.
“Kenya Ni Jina, Nchi Ni Wewe” – Anarana fotsiny ihany i Kenya, ianao no firenena
Ity no teny filamatry ny Hetsi-panentanana Wazi, hetsi-panentanana hanairana ny vahoaka nohetsehin'ny herisetra tamin'ny 2007/2008. Ny tena ifantohan'izy ireo dia ny famoronana sy handefa ny Fanambarana Ny Hafatra ho an'ny Vahoaka any amin'ireo tobin'ny fahitalavitra Kenyana sy ao anaty aterineto.
Amin'ny alalan'ny fampiasana hatsikana sy sary 3D mampiala voly mba hanandratana ny fandriampahalemana sy ny fahaiza-mitantana tsara, manaparitaka ireo lahatsariny amin'ny alalan'ny media sosialy izy ireo.
Taratra anatin'ireo lahatsariny ny zava-kendren'izy ireo, mandrisika ny vahoaka hisafidy mpitondra manan-tsaina (na amin'ity tranga ity, ireo biby any an'àla !):
Mandrisika ny vahoaka (na… vorona…) hiara-hiasa hanohitra ny fitsitokotokoana izy ireo:
Fijery miabo sy mampitraka ny hafatr'izy ireo. Ito ny voalazan'izy ireo momba ny lahatsary farany navoakany:
…Izany dia mikasika ny fampiasanay ny fahasamihafanay hanatanterahana ny nofinofin'ny Kenyana! Ny fampiasanay ny fomba fijery tsy mitovy anananay sy ireo fomban-drazana hananganana fiarahamonina iray mitambatra! Ity lahatsary ity dia mikasika ny tantaran'ny fahalavorariana Kenyana…
Afaka mijery ny ambin'ny lahatsarin'izy ireo ianao ao amin'ny Youtube ary manaraka azy ireo ao amin'ny Twitter.